Akpa akpa ụmụ nwanyị na-emepụta ihe - n'elu ubu, na obere mkpịsị aka, njigide, envelopu, akpa, akpa akwa
Akpa akpa - kedu ihe ha bụ, ihe ha ga-eyi na otu esi emepụta ihe oyiyi?
A na-elewo akpa akpa anya dị ka ihe mmemme nke ịzụ ahịa, n'ihi na a pụrụ ịchọta ha n'aka otu nwanyị azụmahịa . Taa, ọnọdụ ahụ gbanwere n'ụzọ dị ukwuu, ngwa ngwa ndị dị otú ahụ nwere ike ịnwe mmebi ọ bụla.
Akpa akpa ejiji
Nwanyị ọ bụla chọrọ ka ọ dị mma, na-eche echiche ya site n'onyinyo ya ka ọ bụrụ obere ihe. Karịsịa, iji mepụta anya mara mma ma mara mma, ị ga-achọ ngwa ngwa iji chekwaa ihe ndị dị mkpa. Ọtụtụ mgbe, nhọrọ nke ụmụ nwanyị mara mma bụ akpa nwanyi nwere oke, nke nwere ọdịdị mbụ. Enwere ike iji ụdị ihe ndị dị otú a mee ihe ma nwee ma ọ bụ mkpochapụ dị nkenke, ma dịka ihe ndozi magburu onwe ya.
Square Akpaapa akpa
Ezuzu akpa akpa-azụ bụ ezigbo nhọrọ maka ụmụ nwanyị na-arụsi ọrụ ike bụ ndị ga-eji ngwa a karịsịa mgbe mgbe. N'ihi ọdịdị ya na-adịghị ahụkebe, ọ na-ese nnọọ nke ọma na nke mbụ. Tụkwasị na nke a, obere ntakịrị a na - enye gị ohere ịhapụ aka gị ma jiri nwayọọ nwayọọ na - eme ahịa. Inye akpa akpa akpa na-enye aka na nkesa ziri ezi nke ibu, nke na-eme ka e guzobe ihe mara mma na ebe a.
Akpa akpa akpa akpa nwere ike inwe ụdị aghụghọ dị iche iche, Otú ọ dị, ọtụtụ ụdị ụdị ngwa ndị yiri ya dị nnọọ iche na nkenke. N'ihi ihu ndị siri ike na ọdịdị na-agbanweghị agbanwe, a na-eji ngwaahịa ndị a n'ọtụtụ ihe maka ọmụmụ ihe na ọrụ, ya mere ọnụ ọgụgụ nke ihe ịchọ mma dị na ha na-efu efu. Ya mere, nhọrọ kachasị ewu ewu bụ akpa akpa akpa akpa akwa na akwa mgbachi dị n'elu ihu.
Na omenala, a na-emepụta akpa nke okike maka ụmụ nwanyị na-azụ ahịa, bụ ndị site na ozi ha ga-ebu akwụkwọ ndị dị mkpa. Ebe ọ bụ na ngwa ndị dị otú ahụ nwere ntọala siri ike karị na ihu, akwụkwọ ndị ahụ adịghị emetụ na ha ma nwee ike ichekwa ọdịdị mbụ ha ruo ogologo oge, ọbụna na-enweghị nchekwa plastic na polyethylene.
Ka ọ dị ugbu a, obere akpa akpa na-ewu ewu na ụmụ nwanyị azụmahịa taa. Ha na-ele anya nke ọma, nwee nlezianya ma mara mma ma mee ka onye nwe ya sie ike. Ngwunye dị otú ahụ ọ bụla inyom na-azụ ahịa nwere ike ime ka ndị ọrụ ibe ya, ndị mmekọ na ndị na-akwado ya nwee mmetụta dị mkpa ma nweta ihe ndị dị elu na ọrụ ya.
Ogwe njigide akpa
N'oge ihe dị egwu, onye ọ bụla fashionista nọ n'etiti onye ọ bụla anya, n'ihi ya ya onyinyo kwesịrị chere site na obere ihe. N'okwu a, otu n'ime nkọwa kachasị mkpa bụ akpa, n'ihi ọdịdị ya, nghọta nke nwanyị mara mma na-adabere kpọmkwem, na nhọrọ na-ezighị ezi nke ngwa nwere ike imebi ụdị ngosi ejiji. Ihe ọ bụla a chọrọ maka mbipụta bụ akụkụ anọ n'ogologo, ọtụtụ ụmụ agbọghọ na-ahọrọ nhọrọ mbụ ha nwere ike isi pụọ.
Ya mere, ọ bụ ihe na-adọrọ adọrọ mmasị na akpacha ejiri ejiji dị iche iche. Dịka ọmụmaatụ, na Alexander McQueen collection, e nwere nnukwu ihe nchara uhie na-acha uhie uhie nke a na-achọ mma site na nkume ịchọ mma, ndị stylist nke Halston Heritage brand aghọwo ihe mara mma nke mara mma nke na-acha odo odo na ejiji ọla edo nke ihe agha na-eyi ihe n'ihu.
Akpa envelopu akpa
Achọpụta ihe dị mma na nke mbụ na akpa akpa dị n'ụdị envelopu, nke a ga-eyi na aka ma ọ bụ n'okpuru ogwe aka. N'ebe nchekwa dị otú a, ị nwere ike ịchọta ihe ọ bụla ịchọrọ - mgbe emeghere envelopu, a na-ahụ ihe niile dị n'ime ya, dị ka n'ọbụ aka gị. Tụkwasị na nke a, a pụrụ itinye ngwaahịa a na tebụl n'ọtụtụ ọnọdụ. Enwere ike iji ụdị ihe ndị a dị iche iche, ma ihe kachasị ewu ewu bụ akpa envelopu akpịrị akpụkpọ anụ nke dị mma ma mara mma.
Akpa akpa na obere mkpịsị
Otu akpa nwanyi nke nwere oghere na obere mkpịsị aka bụ nhọrọ magburu onwe ya maka ejiji kwa ụbọchị. Dị ka a na-achị, ngwaahịa a ejiri eriri ogologo nke a na-ewepụ, ya mere enwere ike eyi ya n'ụzọ atọ dị iche iche:
na ogwe aka n'aka;
Akpa aka na akpa mkpịsị aka n'ọtụtụ ọnọdụ nwere nha nha, n'ihi ya, ha nwere ike itinye ọ bụghị naanị ihe ndị kachasị mkpa, kamakwa mgbidi, akwụkwọ, akpa ịchọ mma na ọtụtụ ihe ọzọ. Ka ọ dị ugbu a, a naghị etinye akwụkwọ A4 na nchekwa na ha, nke nwere ike ime ka ụmụ nwanyị na-azụ ahịa nwee nsogbu.
Akpa aka, nke a ga-eyi n'elu ubu, abughi ihe a ma ama. Ndị na-ede akwụkwọ na ndị na-emepụta kwa afọ na-etolite ụdị ụdị mbụ nke ụdị ngwaahịa ndị ahụ, gụnyere, n'ụdị square. Ngwa ndị a na-enye gị ohere ịhapụ aka gị, n'ihi ya, ha dị mma maka ejiji kwa ụbọchị. Tụkwasị na nke ahụ, akpa akpa akpa nwanyi na-ele anya na-adọrọ mmasị ma na-egbuke egbuke ma nwee ike ịghọ isi okwu nke onyinyo.
Kedu ihe ị ga-eyi akpa akpa?
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onyinyo ọ bụla na akpa akpa adịghị ahụpụta, n'ihi na ngwa a na - enye anya dị ka ọdịdị dị egwu ma dị mma. Ka o sina dị, nke a apụtaghị na ihe e nyere enye adịghị mfe ijikọta ya na ihe eji akwa uwe nke ndị inyom mara mma. N'ụzọ dị iche, site na ụdị dị mfe ma sie ike, akpa akpa maka ụmụ nwanyị ka a na-ewere dị ka ihe niile - ha na-ejikọta ma uwe ma ọ bụ uwe nwanyị, na ihe dị mfe na egwuregwu ma ọ bụ ụdị ejiji.
Ngwongwo dị ntakịrị na minodiers dị ka nke square nke kwesịrị ekwesị na mgbede na ihe dị nsọ ma na-adọrọ mmasị ndị ọzọ n'ebe onye nwe ha nọ. Ka ọ dị ugbu a, mmadụ ekwesịghị ijikọta ngwa ndị dị otú ahụ na ụdị ihe ịchọ mma na ọmarịcha mma - nke kachasị mma ga- eji uwe obere uwe ojii ma ọ bụ ihe igwe egwu dị mfe n'enweghị ihe ndozi na-enweghị isi. Tụkwasị na nke ahụ, obere akpa blanket nwere ike ịghọ akụkụ nke onyinyo onye na-eto eto na-achọ ịchọta ihe mbụ.
Nnukwu Square akpa
Otu nnukwu akpa buru ibu buru ibu dị mma maka ịzụ ahịa, n'ihi na ị nwere ike itinye ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ọ bụla n'ime ya, ebe ọ na-ewepụ mkpa ọ dị ibu nnukwu ngwugwu. Ka ọ dị ugbu a, ihe buru ibu buru ibu nwere ike ime ka ihe oyiyi dị oke egwu, ya mere ọ ghaghị iji nlezianya jikọta ya na ihe ndị ọzọ.
Ya mere, akpa buru ibu dị oke mma na uwe ejiji, uwe mara mma na ọkpụkpụ na-acha odo odo, nkpachi ma ọ bụ na-achazi anya nke ụdị dị iche iche. Na -eme ihe oyiyi mara mma na nke a na - emepụta ihe, ịkwesighi itinye ụda oke nke akụkụ ala nke ahụ - stylists na - atụ aro izere ogologo ọkpa na lush skirts. N'okwu a, akụkụ nke elu nke ọdịdị yiri nke ahụ, n'ụzọ dị iche, nwere ike ịdị ọkụ - ihe ntanetị atọ nke nnukwu ntutu, nke a na-eji ejiji, coat-poncho na ngwaahịa ndị ọzọ yiri nke a nabatara.
Ihe nkedo agba agba - ihe eji eme ihe na ejiji
Eke si oke oke bekee
Ụmụ nwanyị na-eji akwa mink
Mgbụsị akwụkwọ ndị inyom na-eme n'oge mgbụsị akwụkwọ
Ụdị chaa chara
Ebube Lacy n'enweghị aka
Casket maka nche na winding
Ekere ndị inyom dị afọ 40
Uwe ntutu si Foamiran
Kedu otu esi etinye akwa?
Nwa Mgbaaka ọla edo
Akpa Adidas n'elu ubu
Kedu elekere kachasị mma - quartz ma ọ bụ nhazi?
Nut - bara uru Njirimara
19 ndò nke ndị ụkọchukwu
Zeyn Malik kwuru otú e si achọta obi ụtọ n'ihe ndị dị nta!
Uwe Akpụkpọ anụ Ụmụaka 2014
Nri nri maka nwamba nwamba
Kedu otu esi enyere nwata aka?
Ego ole ka ị ga-aga Gris?
Panthenol maka ihu
Kedu ọmịiko? Ọ dị mkpa inwe ọmịiko na ọmịiko ná ndụ?
Ndị na-egbuke egbuke na ụmụ nwanyị
Utu - umu abuo abuo
Oke akpụkpọ ụkwụ
Ihe mkpuchi spunbond
Ntak-akwụ ụgwọ ọzọ? 15 nwoke na nwanyị na-egwuri egwu ị nwere ike ịchọta n'ụlọ
Kiwi na ntụ ọka banana
Otu esi akpu mmadu ime - ihe omimi nke geisha
Ọgwụgwọ nke scoliosis n'ụlọ